Welcome to Aayaha Nolosha » Fanaanada Sahra Axmed oo geeriyootay iyo Taariikh nololeedkeeda oo kooban.
Fanaanada Sahra Axmed oo geeriyootay iyo Taariikh nololeedkeeda oo kooban.
April 4, 2018 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
ALLE ha u naxariistee waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyootay fanaanaddii Sahra Axmed Jaamac oo maalmihii dambe ku xanuun sanayd magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland.
Fanaanada Sahra Axmed Jaamac ayaa ku geeriyootay isbitaal maalmihii dambe lagu daweynayay oo ay jiiftay oo ku yaala magaalada Hargeysa.
Qof ka mid ah ehelada Fanaanada Sahra Axmed Jaamac ayaa warbaahinta u xaqiijiyay geerida ku timid Fanaanadaasi.
Sahra Axmed Jaamac ayaa la sheegay in ay fanka ku soo biirtay 1969-kii xiligaas oo da’deeda lagu sheegay 13-sano jir.
Waxaa lagu wadaa ALE ha u naxariistee Fanaanada Sahra Axmed Jaamac in lagu aasi doono Magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland.
TAARIIKH NOLOLEEDKII MARXUUMAD SAHRA AXMED JAAMAC.
Sahra Axmed Jaamac waxa ay ka mid ahayd hoboladdii kooxdii Waabari waxaana ay ahayd hobalad sida xidigta uga dhex iftiimaysay fanka Soomaaliyeed mudaddii ay nooleyd, waxayna ku dhalatay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Dumbuluq.
Sahra Axmed sida ay waraysiyo kala duwan oo lala yeeshay ku sheegtay waxa magaalada Ceerigaabo oo qoyskeedu ku noolaayeen la geeyay iyada oo 9-jir ah, wakhtigii ay dadeedu ahayd 13-jirna ay dib ugu soo noqotay magaalada Hargeysa.
Sahra oo wakhtigaasi da’a yarayd waxay ahayd qof fanka aad u xiisaysa aadna u jeclayd waxayna fanka ku soo biirtay sanadkii 1969-kii oo ay wakhtigaas ahayd 13-jir, waxayna magaalada Muqdisho kaga qayb gashay riwaayad uu sameeyey ALLE ha u naxariistee Abwaankii weynaa ee Cali Sugule (Dun Carbeed).
ALLE ha u naxariistee Fanaanadii Sahra Axmed Jaamac wakhtigii ay fanka ku cusbayd waxay qaaday heeso dhowr ah kuwaas oo ay ka mid ahaayeen “ganactaada midig waan u baahanahay hayga goyn gacal walaal” iyo heesta ay wada qaadaan Maxamed Nuur Giriig “Inanyahow khaldani hubka iga dul qaad”.
Markii ay fanka si toos ah u gashay ALLE ha u naxariistee Sahra Axmed Jaamac qofkii ugu horeeyey ee tijaabbiya hibadeeda ayaa ahaa nin Cali Faynuus oo tumi jiray kamanka, waxaana lagu tilmaami jiray fanaanada Sahra Axmed Jaamac in ay ahayd gabadh aad u xishood badan, hase yeeshee xishoodkaasi aanu ka hor istaagin inay noqoto fanaanad weyn oo caan ka noqotay guud ahaan dhulka Soomaalida.
Marxuumad Sahra waxa ay ahayd hoboladdii waabari qaybteedii Hargeysa, sida caadada ah fanaaniintu waxa ay ka qayb qaataan tartan faneed kaas oo uu fanaanku ku soo baxo, hase yeeshee Sahra si caadiya ayaa markiiba loo qaatay oo wax tartan ah oo ay soo gashay ma aanu jirin bilowgii fankeedii.
Sahra sidoo kale nolosheeda dhammaanteed waxa ay ku tiirsanayd ama ay ahayd fanka balse wax kale ma aysan qaban ama kama ay shaqayn jirin, iyada oo matashay riwaayad lagu xasuusto taasoo ahayd “Dab jacayl kari waa” xiligaas oo ay lahayd uurka inanteeda Curada ee Ayaan, iyada oo ay badashay Khadra Daahir Cigge.
Sahra Axmed Guud ahaan waxay caruur dhashay 9-gaal shank a mid ahi waxa ay yihiin Haween, halka afarta kalana ay yihiin wiilal, inanteeda ugu weyn waxa ay hadda dagan tahay oo ay u sugan tahay dalka Filand.
Ugu danbeyntii Sahra bartamihii sanadkii 1999-kii ayay u guurtay qurbaha gaar ahaan dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska waxayna muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnayd isla markaana ay daganayd magaalada Hargeysa oo ay maanta ku geeriyootay, “Inaa li laah wa inaa ilaahi raajicuun”.